Nuur Cadde oo muddo dheer kadib ku laabtay Muqdisho – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Muqdisho – Mareeg.com: Ra’iisul Wasaarihii hore ee dalka Soomaaliya, Nuur Xasan Xuseen (Nuur Cadde) oo sanadahan dambe ku noolaa Yurub ayaa manta ku laabtay caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho, iyadoo garoonka ay kusoo dhaweeyeen wasiiro ka tirsan xukuumadda iyo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka.
Wasiirka Warfaafinta Mustaf Cli Dhuxulow, Wasiirka Haweenka iyo Xuquul Insaanka Khadiijo Maxamed Diiriye, Wasiir kuxigeenka arimaha Dibada Mahad MaxamedSalaad, guddoomiyaha gobalka Banaadir iyo qaar ka mid ah guddoomiyeyaasha degmooyinka gobalka Banaadir ayaa kusoo haweeyey garoonka Muqdisho.
Ra’iisul Wasaarihii hore ee Soomaaliya Nuur Xasan Xuseen (Nuur Cadde) oo Garoonka kula hadlay Saxaafada ayaa ka warbixiyay ujeedada uu u yimid Magaalada Muqdisho.
Wuxuu sheegay in Muqdisho uu u yimid in Bisha Ramadaan shacabka Soomaaliyeed uu kula soomo si nabadgalyo ah, isaga oo shacabka ugu baaqay in dowladda Federaalka Soomaaliya la taageero.
Nuur Cadde ayaa sheegay in shacabka Soomaaliyeed laga rabo in Bisha Ramadaan ay iscafiyaan, maadaama bil cibaado badan oo qeyr leh ay tahay dadkana laga doonayo inay iscafiyaan isagana ay cafiyaan.
“Waxaan ku talinayaa in lagu dedaalo nabadda iyo is jaceylka, islamarkaana wixii ka haray raadadkii dagaalka lagu dhameeyo wadahadal oo laga fogaado wax dagaal ah” ayuu yiri Nuur Cadde.
Siyaasiga Nuur Cadde ayaa tilmaamay in uu Muqdisho ku yimid casumaad ay u fidiyeen maamulka Gobalka Banaadir.
Raysul wasaarahii hore Nuur Cadde ayaa markii uu xilkaas ka tegay sanadkii 2009 loo magacaabay safiirka Soomaaliya u fadhiya Midwoga Yurub iyo Taliyaaaniga, waxaana laga qaaday markii uu xilka qabtay madaxweyne Xasan Sheekh.
Somalia:Weekly Progress Report from The Ministry of information